Tag: ọdịnala ọdịnala | Martech Zone
O mere ọzọ. Anọ m n'otu ihe omume ebe onye dị ike maara nke ọma na mmepe egwuregwu mba ụwa na-ekwu. Ọ na-ekwu okwu banyere nsogbu ụlọ ọrụ nwere na-adọta ndị ọhụrụ Fans na a kpọmkwem ọduọ ụlọ ọrụ. O kwuziri okwu ahụ… mmetụta. Mmetụta - ikike inwe mmetụta na agwa, mmepe, ma ọ bụ omume nke mmadụ ma ọ bụ ihe, ma ọ bụ mmetụta ahụ n'onwe ya. Ndị otu ya na-enyocha ojiji
Ka mgbasa ozi na-aga na dijitalụ, ndị na-ere ahịa na-arụ ọrụ iji gbakọọ oke kachasị nke mmefu ego ha. Ọ bụghị nanị iru ihe ha zubere, ọ ga-eritekwa uru nke onye ọ bụla na-ajụ iji ghọta n'ụzọ zuru ezu ahịa ahịa. Ihe omuma ihe omuma a na egosi ihe omuma ihe omuma ya na usoro ndi ahia n’agha iji nweta ya. Mgbasa ozi dijitalụ na-aghọ ngwa ngwa na ndị ahịa. Site na 2017, mgbasa ozi dijitalụ